Kungani amaqabunga e-pelargonium ebovukile, ahlambulukile, asomile: yini okufanele akwenze ngayo nokuthi angakuvumeli kanjani esikhathini esizayo? - Ukukhiqiza ukukhiqiza - 2020
Amaqabunga e-Pelargonium aphendukile, asebenze noma aome: kungani lokhu kwenzeka futhi kufanele benzeni?
I-Geranium ingenye yezimbali ezivame kakhulu, etholakala cishe kuwo wonke umama wendlu noma umlimi. Kungabonakala emafasiteleni nama-balconi, imbali idala induduzo futhi ihlanza insimu.
Kodwa kwenzeka ukuthi lesi sitshalo sigula futhi siyeka ukujabulisa ngokubukeka kwayo okunempilo kanye nezimbali. Yini okufanele uyenze kulokhu?
Izinkinga zamahlamvu namaxazululo
Amaqabunga e-Pelargonium ayidingi ukunakekelwa okukhethekile, akudingeki ukuba basuswe njalo othulini njengesibeletho. Zihlukile ngendlela evamile, ngesignali sokuqala yokunakekelwa okungalungile kwembali, izinkinga ngesistimu yempande noma ukungabi nalutho kwezakhi zokulandelela. Siyabonga, ungakwazi ngokushesha ukubona ukuthi kwenzekani ngesitshalo nokuthi yikuphi usizo oluphuthumayo okufanele alunikeze.
Uma uqala ukuthatha izinyathelo ngokuhamba kwesikhathi, imbali izobuya ngokushesha. Uma kungenjalo, isitshalo sidinga ukufakwa emhlabathini omusha, noma sizofa ngokuphelele (mayelana nezici zokutshala nokufakelwa kabusha kwe-pelargonium, funda lapha).
Kungani amaqabunga ephihliwe noma egoqwe? Lokhu kwenzeka ngokunakekelwa okungalungile noma ukungabi namakhamuza. Uma ubona inkinga ngokushesha, ungakwazi ukuyixazulula ngesikhathi esifushane.
Amaqabunga aphika ngezansi. - Lesi sibonakaliso esiqinisekisiwe sokuntuleka kwe-nitrogen enhlabathini. Udinga ukusebenzisa umanyolo okhethekile.
Hlukanisa umkhiqizo ngokwemiyalo, ngokulandela ukulinganisa okucacisiwe. Ukuqothulwa kwezinto ezilahlekile kuzoholela emiphumeleni yengozi kulesi sitshalo.
Ukungabi nokukhanya. Qaphela lapho ibhodlela itholakala khona ngembali nokushisa. I-Geranium ithanda ukushisa okungahambi kahle. Ngakho-ke, unikeze ngokukhanya okungafani, akukho ama-drafts nokufinyelela emoyeni omusha.
Izinambuzane. Ngemuva kwamaqabunga angase avele ama-midge amancane adla isitshalo. Kulesi simo, kuyadingeka ukususa izinambuzane futhi uphathe amaqabunga ngesisombululo esenziwe nge-sese noma inambuzane esithengiwe esitolo.
Ukutheleleka ngegciwane. Akukhona nje amaqabunga aphikisiwe, kodwa futhi nezimbali ezimbi ezibukeka sengathi ziphukile, zifakazela ukutheleleka ngegciwane. Kulesi simo, lesi sitshalo asikwazi ukuphulukiswa, kodwa kufanele sikhawuleze sibekwe kwezinye izimbali.
Kungani amahlamvu ebomvu?
Ukukhanya kwelanga. Inkinga kwenzeka entwasahlobo nasehlobo, lapho ilanga liziphatha kahle. Ukuze uxazululwe lesi simo, susa i-geranium kude efasiteleni futhi ungene ngqo emisebeni.
Hlala Uma entwasahlobo uveza lesi sitshalo emgodini, bese ubusuku obubandayo udinga ukubalethe endlini. Ebusika, udinga ukuhlanza ibhodlela ngemidwebo. Kodwa, ungafaki imbali eduze nezakhi zokushisa. I-Geranium ithanda ukushisa okungathathi hlangothi.
Izifo ze-fungal. Uma ehlobo isitshalo sitshalwe emhlabathini ovulekile, singatheleleka ngefungus engasuswa ngokuphatha isitshalo nge-agent ekhethekile. Lesi sitshalo kufanele sikhawulelwe kwezinye izimbali, ukuze i-fungus ingahambi kwezinye izimbali ezikhulayo ebhodweni.
Ukuntuleka kwezakhi zomkhondo. Ngokuvamile amaqabunga e-geranium ahlanganiswe nezindawo ezibomvu lapho lesi sitshalo singenalutho, okuyi-iron. Ungayengeza nge-bait ekhethekile noma umanyolo.
Khumbula ukuthi akunakwenzeka ukutshala isitshalo ebusika izikhathi ezingaphezu kwamasonto amabili.
Kungani amaqabunga emile? Lokhu kwenzeka ngezizathu ezihlukahlukene.
Ibhodlela. Ibhodwana elincane lingavumeli izimpande zithole inani elidingekile lamanzi kanye nezici zokulandelela. Lesi sitshalo asikwazi ukuthuthukisa nokusebenza ngokugcwele. Ngakho-ke, kufanele ifakwe kwenye ibhodlela, lapho kukhona uhlelo lokudonsa amanzi namanzi.
Ngesikhathi sekwindla-ebusika udinga ukushintshela kwesinye isimiso sokunakekelwa. Phakathi nalesi sikhathi, lesi sitshalo kumele sibekwe phambili emakhazeni nasebandleni. Nciphise inani lokuchelela.
Izitshalo ezingavamile zokuthambisa. Naphezu kokuthi i-geranium ayithandi ukuchelela okuningi, kubalulekile ukuphatha ngokucophelela uhlelo lokunisela. Inhlabathi kufanele ibe nemanzi, kepha ayizange ikhuphuke. Uhlelo lokudonsa luzosindisa izimpande ngokubola.
Ukukhanya okungaphezulu. Ilanga eliqondile kanye nelanga elide lokukhanya liba nemiphumela emibi embali. Kumele kubekwe eceleni endaweni lapho kukhona khona umbala okwanele, kepha akukho ukukhanya okucacile emisebeni.
Imininingwane yokuthi kungani amaqabunga e-pelargonium ephenduka ophuzi futhi omile nokuthi angalungisa kanjani inkinga, esitshele kule ngqungquthela.
Sinikeza ukubuka ividiyo mayelana nezimbangela zokuma amaqabunga e-pelargonium nendlela yokuxazulula inkinga:
Izinyathelo zokuvimbela ukunakekelwa nokudla okufanele. Amaphuzu aphambili wokunakekelwa angabhalwa:
Umswakama. Lesi sitshalo sithanda inhlabathi emanzi, kodwa akufanelekile ukuyihambisa ngamanzi. Kudingekile ukuhlinzeka uhlelo oluhle lokudonsa amanzi futhi ufake ukuma lapho amanzi okudlulayo eyogeleza khona.
Imodi yokushisa. Ehlobo, lesi sitshalo singafakwa emgodini, into esemqoka ayikho ilanga eliqondile, ikakhulukazi emthunzini.
Ebusika, ungafaki isitshalo emasimini bese ufakwa eduze namabhethri noma ukushisa izinhlelo.
Umanyolo. Kungcono ukutshala isitshalo ngezingxenye zamaminerali ngesikhathi sasehlobo lapho imbali ikhula ngamandla. Lokhu kufanele kwenziwe njalo amasonto amabili. Futhi ebusika, ukunciphisa ukudla kuze kube njalo ngemva kwamasonto ayisithupha kuya kusikhombisa. Imininingwane yokuthi ungamanzi nokuthi ungondla kanjani i-pelargonium, ingatholakala lapha.
Hlola isitshalo njalo izinambuzane noma ukubola izingxenye zezitshalo. Ngokushesha ususe izimbangela zezifo. Funda kabanzi mayelana nezifo kanye nezidumbu zesitshalo, kanye nokuvimbela nokulawula kwabo ekhaya kungaba lapha.
Sinikeza ukubuka ividiyo mayelana nokuvimbela kwezifo ze-pelargonium:
I-Pelargonium iyimbali enhle futhi engenakuthobeka, okuyinto ethandwa kakhulu phakathi kwabalimi. Ukwandisa lesi sitshalo kulula kakhulu. Funda izinto zethu zendlela yokukhulisa imbali encane evela ezihlwini nasezincweni.
Uma ulandela imithetho yokunakekelwa, i-geranium izokujabulisa ngokubukeka okunempilo kanye nezimbali ezivamile. Kubalulekile ukuhambisana nenqubo yokunisela yokusetha, ukubeka isitshalo, lapho kukhona ukungcweliswa okwanele, kodwa akusikho ilanga eliqondile. Ukunakekelwa nokunakekelwa okulula kukuvumela ukuthi ugcine isitshalo siphelile.